“Mba Niile Ga-amarakwa na Mụ Onwe M Bụ Jehova”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Niuean Norwegian Ossetian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
OLEE otú obi ga-adị gị ma mmadụ bo gị ebubo na i mere ihe ọjọọ ị na-emeghị? Ya bụrụkwanụ na ihe o boro gị na i mere kpataara ndị mmadụ nsogbu, kpatakwara ọtụtụ ndị ọ na-enweghị ihe ha mere ahụhụ? O doro anya na ị ga-achọ igosi na aka gị dị ọcha! Ị̀ ma na a na-ebo Jehova ụdị ebubo a? Ọtụtụ ndị taa na-ekwu na ọ bụ Chineke na-akpata mmegbu na ahụhụ ndị juru n’ụwa. Jehova ọ̀ chọrọ ka a kwụsị imebi aha ya otú a e si emebi ya n’ihi ebubo ndị ahụ a na-ebo ya? N’eziokwu, ọ chọrọ! Ka anyị hụ ihe e kwuru n’akwụkwọ Ezikiel.—Gụọ Ezikiel 39:7.
Jehova kwuru, sị: “M gakwaghị ekwe ka e metọọ aha nsọ m.” Mgbe ọ bụla ụmụ mmadụ boro Chineke ebubo na ọ bụ ya na-akpata ahụhụ ndị mmadụ na-ata, ihe ha na-eme bụ imebi aha ya. Olee otú o si bụrụ imebi aha ya? Na Baịbụl, “aha” mmadụ na-egosikarị ụdị onye mmadụ bụ. Otu akwụkwọ kwuru na aha Chineke na-anọchi anya “ihe ndị ọzọ maara banyere ya, ya bụ, ihe o mere ka ndị ọzọ mara banyere ya. Ọ na-anọchikwa anya ùgwù a na-akwanyere ya.” Nke a bụ eziokwu n’ihi na aha Jehova na-anọchikwa anya ụdị onye ọ bụ. Ma ajụjụ bụ, Olee otú Jehova si ele ahụhụ ndị mmadụ na-ata anya? Ọ kpọrọ ya asị! Ọ na-emetekwara ndị na-ata ahụhụ ebere. * (Ọpụpụ 22:22-24) Mgbe ọ bụla ụmụ mmadụ kwuru na ọ bụ Chineke na-akpata ahụhụ, nke bụ́kwanụ ihe ọ kpọrọ asị, ihe ha na-eme bụ imebi aha ya. E nwere ike ikwu na ihe ahụ ha na-eme bụ ‘ilelị aha ya.’—Abụ Ọma 74:10.
Ị̀ hụrụ na n’Ezikiel 39:7, Jehova kwuru “aha nsọ m” ugboro abụọ. N’ọtụtụ ebe na Baịbụl, e kwuwe banyere aha Jehova, a na-ekwu na ọ ‘dị nsọ.’ Ọ bụrụ na e kwuo na ihe ‘dị nsọ,’ ihe ọ pụtara bụ na ihe ahụ dị iche, nakwa na ihe ahụ dị ọcha. Aha Jehova dị nsọ n’ihi na Chineke, bụ́ onye na-aza aha ahụ, dị nsọ, o nweghịkwa ihe jikọrọ ya na mmehie ma ọ bụ adịghị ọcha. Ị̀ hụla otú o si bụrụ na ndị na-ekwu na ọ bụ Jehova na-akpata ihe ọjọọ ndị na-eme n’ụwa na-ete “aha nsọ” ya unyi?
Isi ihe e kwuru na Baịbụl bụ na Jehova ga-eji Alaeze ya mee ka a kwụsị ite aha ya unyi. Akwụkwọ Ezikiel gosiri na nke a bụ eziokwu n’ihi na o kwuru ugboro ugboro na “mba niile ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova.” (Ezikiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Ị̀ hụrụ na ọ bụghị mba ndị ahụ ga-eji aka ha họrọ ma hà ga-amara na ọ bụ ya bụ Jehova? Kama nke ahụ, ha ‘ga-amara,’ ma hà chọrọ ma hà achọghị. Ihe a na-ekwu bụ na Jehova ga-amanye mba niile dị n’ụwa ịmata na ọ bụ ya bụ Jehova, bụ́ Ọkaakaa Onyenwe anyị, onye aha ya dị nsọ, dịkwa ọcha.
Ihe ahụ Jehova kwuru ọtụtụ ugboro, nke bụ́ na “mba niile ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova,” kwesịrị ime ndị chọrọ ka ahụhụ na mmegbu kwụsị obi ụtọ. N’oge na-adịghị anya, Jehova ga-emezu ihe a o kwuru ma gosi na ebubo niile ahụ a na-ebo ya abụghị eziokwu. Ọ ga-eme ka ihe ọjọọ kwụsị, bibiekwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Ma, ọ ga-eme ka ndị na-akwanyere aha ya na ihe aha ya nọchiri anya ya ùgwù dịrị ndụ. (Ilu 18:10) Ọ̀ bụ na ị gaghị achọ ịmụta ihe ị ga-eme ka gị na Jehova, bụ́ Chineke dị nsọ, onye ‘hụkwara ikpe ziri ezi n’anya,’ dịrị ná mma?—Abụ Ọma 37:9-11, 28.
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na Baịbụl n’ọnwa Septemba:
▪ Ezikiel 39–Daniel 3
^ par. 4 Gụọ isiokwu bụ́ “Bịaruo Chineke Nso—Onye Hụrụ Ikpe Ziri Ezi n’Anya,” nke gbara n’Ụlọ Nche November 1, 2008.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Mba Niile Ga-amarakwa na Mụ Onwe M Bụ Jehova”